पेट्रोल छर्की आगो लगाएर भावनाको हत्या, श्रीमानको संलग्नता ! — onlinedabali.com
पेट्रोल छर्की आगो लगाएर भावनाको हत्या, श्रीमानको संलग्नता !
काठमाडौं । फेरि आगो लगाएर एक युवतीको हत्या गरिएको छ । त्यो पनि पेट्रोल छर्केर । घटना डोटीको हो । शिखर नगरपालिकाकी भावना भट्टको आगो लगाएर हत्या गरिएको बताइएको छ ।
शिखर नगपालिका वडा नं.४ मुडभराकी २६ वर्षिय भावना भट्टको आगो लगाएर हत्या गरेको माइती पक्षले आरोप लगाएका छन् । उनका परिवारकै सदस्यले पेट्रोलियम पदार्थ छर्किँदै आगो लगाएर हत्या गरेको भावनाका दाई शालिग्राम भट्टले दाबी गरे । हत्यामा भावनाका श्रीमान मीनराज शर्माकै संग्लनता रहेको भट्टको दाबी छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) दिलीपसिंह देउवाले घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कुनै उजुरी तथा जानकारी नआएको बताए । उनले घटनाबारे कुनै जानकारी र उजुरी नआएको जानकारी दिँदै उजुरी आएपछि प्रहरीले आफ्नो काम थाल्ने बताए ।
शरीरमा आगो लागेपछि मंसिर ७ गते गम्भीर घाइते भएकी भावनालाई उपचारका लागि डोटीकै सुजङ अस्पतालमा पुर्याइएको थियो । उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि मृतक भावनालाई सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलाली पठाएकोमा कैलालीबाट पनि उनलाई थप उपचारका लागि भारतको बलेरी लगिएको थियो ।
बेरी अस्पतालले उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको भन्दै घर पठाए पनि घरमा ल्याउँदा उनको मृत्यु भएको थियो । भावना र शर्माबीच २ वर्षअघि मात्रै बिवाह भएको थियो ।